देशकै दोस्रो ठूलो रंगशाला संरक्षण अभावमा जीर्ण (भिडियो)
खेलकुदशुक्रबार, १३ पौष , २०७५
काठमाडौंस्थित दशरथ रंगशालापछिको दोस्रो ठूलो नारायणी रंगशाला वीरगञ्जमा छ। तर, उचित संरक्षण र मर्मत सम्भार नभएका कारण जीर्ण बन्दै गएको छ।
वीरगञ्जस्थित नारायणी रंगशाला । तस्वीर- सुरेश बिडारी
दर्शक बस्ने प्याराफिट भत्किएर प्वाल परेको छ। इन्जिनियरले उत्तर र दक्षिणतर्फको प्याराफिटमा दर्शकलाई राख्दा दुर्घटना हुने बताउँदै सचेत गराइसकेका छन्। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई नुन गोदामको रूपमा प्रयोग गर्न दिएका कारण प्याराफिट कमजोर भएको प्राविधिकहरूको भनाइ छ। २०४२ सालमा निर्माण भएको रंगशालामा साँझ-बिहान शारीरिक व्यायामका लागि खेलाडी र सर्वसाधारण पुग्ने गर्छन्।
तत्कालीन अञ्चलाधीश लक्ष्यबहादुर गुरुङले चन्दा र कर संकलनबाट करिब रु. १ करोड लागतमा यसको निर्माण गराएका थिए। रंगशाला घेर्न तारबार र पर्खाल लगाइएको छैन, जसका कारण जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। यस्तै, अधिग्रहण गर्दादेखिकै जग्गा विवाद यथावत छ।
रंगशाला परिसरमा १७ बिघा १५ कठ्ठा ७ धुरमध्ये जिल्ला खेलकुद विकास समिति पर्साको नाममा १३ बिघा ७ कठ्ठा २ धुर मात्रै छ। नारायणी क्रिकेट मैदानतर्फको जग्गामा अझै विवाद चलिरहेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष निशान्त लामिछाने बताउँछन्। “जग्गा साटफेर गर्ने भनिएको छ। तर, प्रक्रिया पूरा नभएका कारण अल्झिएको छ,” लामिछाने भन्छन्, “जग्गा भएकालाई त अर्को ठाउँमा दिँदा पनि हुन्छ तर घर भएकाहरूको समस्या छ।”
विगतमा बृहत राष्ट्रिय खेलकुद, तेजबहादुर गोल्डकप, लक्ष्मण थापा स्मृति गोल्डकप तथा एएफसी यू-१६ छनोट प्रतियोगितामा व्यस्त रहने रंगशाला जीर्णोद्धारको पर्खाइमा छ। २०५८ सालमा युवा स्पोर्टस् क्लबले फुटबल खेलाडी स्व. लक्ष्मण थापाको स्मृतिमा लक्ष्मण थापा गोल्डकप प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। यो प्रतियोगिता पनि एक पटकभन्दा बढी सञ्चालन हुन सकेन। त्यसपछि नारायणी रंगशालामा ठूला प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। यस्तै, शहीद तेजबहादुर अमात्यको स्मृतिमा हुने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अमात्य गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता पनि २०५७ सालदेखि सञ्चालन हुन सकेको छैन।
उक्त गोल्डकप सञ्चालनका लागि ट्रष्ट नै स्थापना गरिएको छ। ट्रष्टसँग प्रतियोगिता गर्न आवश्यक रकम पनि नभएको होइन। तर, प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। गत वर्षदेखि सोही रंगशालामा राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी विशाल थापाको स्मृतिमा विशाल मेमोरियल गोल्डकप शुरु गरिएको छ।
पर्सामा जिल्लास्तरीय फुटबल खेल्ने ९ र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने ३ वटा क्लब सक्रिय छन्। वीरगञ्ज युथ एकेडेमी, युवा स्पोर्टस् क्लब, वीरगञ्ज युनाइटेड र भेट्रान्स सिटी युवा क्लबले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रियस्तरका फुटबल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइरहेका छन्। तर, स्थानीयस्तरमा प्रतियोगिताहरू आयोजना हुन नसकेकामा खेलाडीहरू दुःखी छन्।
हालसम्म उक्त रंगशाला ३ पटक मर्मत भएको छ। मर्मत सम्भारका लागि रु. २ अर्ब ६६ करोडको डीपीआर तयार पारिएको छ। तर, रकम अभावमा काम हुन सकेको छैन। मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष मानदेव हजरा नारायणी रंगशालालाई जोगाउन आफूहरू प्रयासरत रहेको बताउँछन्। “रंगशालालाई पर्खालले घेर्ने काम थालेका छौं। त्यसका लागि रु. ७५ लाख आएको छ,” उनी भन्छन्, “डीपीआरअनुसार कसरी काम अघि बढाउने भनेर पनि छलफल गरिरहेका छौं।”